Ndakanzwa achiita kuputika mukati mebeche achibva atunda ipapo - Masasi eHarare
DzeBonde Ndakanzwa achiita kuputika mukati mebeche achibva atunda ipapo
Ndakanzwa achiita kuputika mukati mebeche achibva atunda ipapo
Nerimwe zuva ndakagara hangu pamba iri Thursday apa ndapihwa off day kubasa, munogoziva kuti Thursday iLadies night. Ndakapfeka black jean rangu neshirt yaiyita kubata muviri zvekuti mhasuru dzese dzaiwoneka semunhu ainge ambobuda ndichiyenda ku VirginActive Gym ndabva kurova simbi ndakavhura button repamusoro apa tubvudzi twepachest tuchiwoneka apa ndichinhuwirira Ferrari Red Power Deo yandainge ndatengerwa neimwe sugar mama yandaipota ndichisvira maweekends.
Sugar mama yangu yainge iri out of town hanzi I am in Dubai ku shopping, saka ndakayenda ku Melrose Arch ndokunogara paneimwe restaurant ndokuita order coffee what I didn’t know was Ladies night haisi in Clubs only kana muma coffee shop mababe anenge akangogara vachiita makuhwa or just having fun zvavo. Pasina nguva pakauya rimwe babe pandainge ndiri zvikanzi hesi, my name is Sara, masasi amai vainge vakasimba mhani kuita chidhafu dhunda chaicho apa inini ndainge ndichitsvaga zvebeche musi uyu, ko ndainge ndatova ne two weeks sugar mama iri kuDubai.
Ndakati I am Max and ndafara kukuziva, akabva ati inini ndiri munhu anoda kuita straight talk ndikabva ndati kana neni ndinoda munhu anotaura direct, ndawona kasmile zvikanzi okay cool ndirikudawo kusvirwa. Munhu akasimba seni ndinogona kuita more than 6 months ndisina kusvirwa nekuti vanhu vanondiwona ndakasimbisa asi beche ndinaro hombe and rakatotota izvozvi. Ndakangoti unogara kupi zvikanzi just around the corner, ndakayenda naye aaah imba yainge yakanaka iyoyo apa munhu aigara ega, dzimwe nguva mari haitenge mboro kunyangwe ukaita yakawanda sei.
Mukadzi ainge akasimba mhani uyu ndokubva ananga neni mubathroom after tabva kunwa wine, takati tichigeza mushower yainge yakakura mhani iyoyo, ndakatanga kumuzora shower gel muviri wese ndikanzwa muviri wese wakutsvedzerera apa ndaiti ndikaguma beche rake munhu obva ayita kuyuwira kunge achatunda nekubatwa chete, I am sure akatotunda chete but nesipo yainge iri pamuviri wake handina kuzviwona asi ndakanzwa munhu achita kugwinha gwinha. Takapedza kugeza ndokubva ndayendeswa mubedroom make mainge mune King size bed chaiyo, zvinhu zvake zvese zvainge zvakangokura.
As much as ainge akakura mwana wevanhu ainge ari flexible, aiyita kukanda makumbo mudenga obva ayita kumavhura zvekuti ndaiwona beche rake rese mukati kati rakaita kuzvimba, ndakabva ndavhura mboro yangu ndichipfeka kondom ko tainge tabatana kare chainge chasara kusvirana chete. Ndakaita kukwira pamusoro pake ndokubva ndatanga kuinyudza mukati apa ndaiita kunge ndichakandwa paceiling nechikapa chaiitwa nebabe iri. Ndakatanga kukoira kusvikira munhu akuita kunge apererwa nemweya apa achishinyira nekunakirwa nemboro ndikanzwa achiita kuputika mukati mebeche achibva atunda ipapo.
Ndakanzwa achiita kuputika mukati mebeche